| 2018-08-24 Published
निर्माण सञ्चार, जुम्ला । कर्णाली क्षेत्र भौगोलिक रुपले एक विकट क्षेत्र हो । हिमालै हिमालको बाटोमा लेकबेसी गर्ने यहाँका नागरिकको दिनचर्या नै बनिसकेको सदीयौं भयो ।
वर्षा ऋतुमा गाईवस्तु लेकमा लैजाने र ल्याउने यहाँको दैनिकी नै हो । यस कामले मानिसहरु आउने जाने भइरहन्छ ।
गाईवस्तुलाई खाने कुडोदेखि आफुलाई खाने खाद्यन्न लगायत सामान दैनिक रुपमा पिठ्युमा बोक्ने हिलाम्मे बाटोमा हिड्दै घण्टौं हिडेर पुग्ुनुपर्ने बाध्यता कर्णालीमा अझै छ ।
तर जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका १ नम्बर वडा राँका गाउँमा रोप–वे सञ्चालन भएपछि यी दुखबाट यहाँका स्थानीयलाई छुटकरा मिलेको छ ।
झण्डै १५ सय मिटर लामो दूरी रोपवे निमार्ण भएपछि लेकका फलेको स्याउ सिमी जस्ता उत्पादित वस्तु अब सरर रोप–वेबाट आउन थादेको छ ।
कर्णालीमै पहिलो पटक जुम्लामा सामान ओसार पोसार गर्ने रोपवे संचालन जुम्लाको राँका गाउँमा भएको छ । जुम्लाका नागरिकले आशै नगरेको रोप–वे संचालन भएपछि दंग छन् ।
पहिले ४/५ घण्टा लगाएर गरिने काम अहिले रोप–वेले ५ मिनटमै गरेको छ । यसले उनीहरुमा दुख कम र खुसी बढी देखिएको हो ।
घरदेखि तरापी पाटनसम्म गह्रौं भारी बोक्नुपर्ने, हिलो बाटोमा उकाली ओराली गर्नु पर्ने, चोटपटकको जोखिम पनि त्यतिकै । तर, रोपवेले घटाएको दुख साँच्चिकै भविष्यमा पनि सम्झन लायक हुने छ ।
स्थानीय दंग !
स्थानीय परे दमाई के भन्छन् त ? ‘सामान आफै आउन थालेको छ । मजाले बसेर लिने मात्रै हो । सामान सबै आफू भन्दा अघि पुग्छ । खाली हिडेर आरामले पाटनमा पुगिन्छ । अहिले त सुख आएको जस्तो भएको छ ।’
विकास परियोजनाले गाउँलेमा दिएको खुसियाली भुल्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
अहिले राँका गाँउका २ सय बढी घरधुरीको दैनिकी त्यहाँको तरापी पाटन क्षेत्रसँग जोडिएको छ । राँका गाँउका अधिकांश स्थानीयको खेतीयोग्य जमिन पनि तरापी पाटन क्षेत्रमै छ ।
पुर्खौदेखि राँका गाँउबासी सो क्षेत्रमा मुख्य कुषि उपज उत्पादन तथा पशुपालन गर्दै आएका छन् ।
वर्षाको झरी र चैत, वैशाखको हुरीबतासमा समेत यसरी गाँउदेखि पाटनक्षेत्रमा आउजाउ गर्न निकै जोखिम भएपछि अधिकांशले त्यहाँ वर्षा सिजनमा बस्ने घर समेत बनाएका छन् ।
कतिपयले बालि उत्पादनदेखि संकलन गरी घर भित्र्याउँदासम्म दुई, चार महिना तरापीमै बस्ने गरेका छन् । अब रोपवेको निर्माणसँगै घरदेखि तरापी आउजाउ गर्न बाध्यता राँकाबासीलाई हटेको छ ।
कर्णालीमै पहिलो रोपवेः निमार्णमा ४२ लाख
रोपवेबाट सामान आयत, निर्यात गर्दा प्रतिकेजि एक रुपियाँ लिने गरेको अपरेटर टक्क बुढाले बताए ।
उनका अनुसार रोपवे संचालनबाट संकलन भएको रकममध्य ४० प्रतिशत अपरेटर खर्च र बाँकी मर्मत संभार कोषमा जम्मा गर्ने गरीएको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र तातोपानी गाँउपालिकाको समन्वय, युरोपेली संघ, जर्सी ओभरसिज एडको आर्थिक सहयोग तथा प्राटिकल एक्सनद्वारा संचालित विकास परियोजना अन्र्तगत कर्णालीमै पहिलो पटक १४ सय ८० मिटर लामो रोपवे निर्माण भएको हो ।
रोपवे निर्माणमा ४२ लाख, ८६ हजार, १ सय ५८ रुपियाँ लागत खर्च भएको विकास परियोजना संयोजक दशरथ उपाध्यायले बताए ।
उनका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य हाम्रो हो ।
नागरिकको कार्यबोझ घटाई उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउनका लागि सहजता गर्न रोपवे निमार्ण गरी संचालनमा आएको हो ।
अबको केहि समयपछि ३ नम्बर वडामा पनि रोपवे निमार्ण हुने छ ।
‘रोपवे कहिल्यै देखेकि समेत थिइनँ, सामान ओसार्न निकै सहज हुँदोरैछ’ राँका गाँउकि गोरी सार्कीले भनिन्, ‘यो मैले कल्पना नगरेको विषय हो ।
वर्षौदेखि सरकार तरापी जोड्ने सडक काट्दै थियो, तर ६ महिनामै रोपवे बनेर सामान ढुवानि गर्न पाँउदा अचम्म लागेको छ ।
उनीजस्तै घरबाट खाने कुरा तथा लत्ताकपडा लगाएतका सामाग्री पाटनमा र पाटनबाट घाँस, दाउरा लगाएत कृषि उपजहरु घर ओसार्दै गरेका नवराज रावल पनि निकै खुसी छन् ।
उनले भने, ‘अब बोझ बोकर घरबाट तरापी पाटन हिड्नुपर्ने बाध्यता हट्यो, सामनसँग हिड्दा थकाइ मात्र होईन जंगलमा डरत्रास पनि त्यत्तिकै हुन्थ्यो ।’
सिमी उत्पादनको पकेट क्षेत्र
तरापी पाटन तरापीपाटन क्षेत्र जुम्लाको स्याउ र सिमी उत्पादनको हिसाबले पकेट क्षेत्र पनि मानिन्छ ।
कर्णाली राजमार्गबाट एकतर्फी तिनघण्टा पैदल हिड्नुपर्ने सो क्षेत्रमा जाँदा आँउदा जोखिमपूर्ण गोरेटो बाटो भएकाले ढुवानीमा सास्ती भोगेका कृषकहरुलाई स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उपजको ढुवानी गर्न सहज हुने भएको छ ।
फोटो क्याप्सन- रोपवे मार्फत घरबाट तरापिपाटनमा सामान पठाउँदै, राँकाबासी ।
जुम्लाबाटसागर परियारको फोटो फिचर
शुक्रबार, ८ भदौ, ०७५